Ithini inkcazo yewotshi esebenzayo engangeni manzi? Ngaba kunokwenzeka ukuba uhlale unxibelelana namanzi ixesha elide? Ngapha koko, inqanaba lokungangeni nothuli elingenamanzi kwiimveliso ze-elektroniki zichazwe ngokubanzi b ...
Yintoni ukubekwa kweliso kwentliziyo?
Oko kubizwa ngokuba liliso lokubetha kwentliziyo ngumlindo onokurekhoda ngokuchanekileyo ukubetha kwentliziyo yethu ngexesha lokwenyani ngexesha lokuzilolonga. Indima yokubeka esweni ukubetha kwentliziyo ekusebenzeni okunenjongo icacile. Kukho imigaqo emibini eqhelekileyo yomlinganiso wetafile yokubetha kwentliziyo, omnye yi-curr yentliziyo ...
Unxiba njani ulondolozo lwesongo oluhle?
1. Gcina izixhobo ezicocekileyo zicocekile. Coca izihlahla zakho kunye nezacholo ezi-smart rhoqo, ngakumbi emva kokuzilolonga, ukubila, okanye ukudibana nolusu ngezinto ezifana nesepha okanye isepha. Ezi zinto zinokuncamathela ngaphakathi kwisangqa; Sukusebenzisa isicoci sendlu ukucoca isongo. Endaweni yoko, sebenzisa njalo ...
Yintoni i-Smart Bracelet? Wenza ntoni iSmart Bracelet?
Isangqa sesandla esikrelekrele sisixhobo esikrelekrele esinokunxitywa, umsebenzisi emva kokunxiba iisongo ezintle, abasebenzisi banokurekhodwa ngokwenza umthambo ngesandla kubomi bemihla ngemihla, njengokutya kunye nokulala idatha yexesha lokwenyani, kwaye inokuba kukungqinelanisa idatha kwiselfowuni okanye izixhobo zekhompyuter, emva koko thr ...
Izixhobo ezinxitywa zi-Smart zisebenzisa ixesha elitsha lolawulo lwezempilo
Ubhubhane ukhuthaza ibango kwimpilo, kunye neemarike ezinxitywayo zijolise kwimpilo yexesha elizayo Ngokusasazeka kwezixhobo ezinxitywayo ezikrelekrele, umbono wolawulo lwezempilo uhlawulwe ngakumbi nangakumbi luluntu. Ngokwesifundo esivela kwiYunivesithi yaseStanford, idatha eqokelelwe yi-wearabl ...
Ungayifaka njani insallation kunye nonxibelelwano lweBluetooth
Nceda ukhangele i-APP kuGoogle Play kwiselfowuni ka-Android okanye ivenkile yeAPP kwi-iphone; Okanye uskene ikhowudi ye-QR kwi-smartwatch ukukhuphela kunye nokufaka i-APP. Nceda uqaphele ukuba i-Android ixhasa i-4.4 nangaphezulu; IOS ixhasa i-8.0 nangaphezulu; I-Bluetooh hardware 4.0 nangaphezulu. Bopha i-smartwatch, cofa ukhetho o ...